Ixesha elide lokuRenta okuLuxury - I-Airbnb
Ixesha elide lokuRenta okuLuxury
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCabin
UCabin unezimvo eziyi-624 zezinye iindawo.
Imboniselo ebukekayo yaseWaterfront kule Cabin ye-3bed/4bath End yeyokonwabela unyaka wonke! Ikhitshi ehlaziyiweyo enezinto eziphezulu zokubala zegranite, kunye ne-corion kumagumbi okuhlambela, enomgangatho omtsha wamaplanga kunye nekhaphethi kulo lonke. Le yunithi inefenitshala epheleleyo iza nayo yonke into ukusuka kwiisofa, iibhedi (kwiindwendwe ezili-18), itafile yokutyela, iTV, iiseti zokulala, izixhobo zasekhitshini, nokunye okuninzi. Yonwabela itafile yeping-pong ukonwabisa nayo.
Ingaba le yunithi inkulu kakhulu/ibiza kakhulu? Sineeyunithi ezincinci/ezingabizi kakhulu ngokunjalo.
Ibekwe kanye ecaleni kwe-Starved Rock State Park kwaye kukuhamba okufutshane ukusuka kwi-I-80. Ukuhamba ngokukhawuleza ukuya ePeru, eOttawa, eOglesby nakwezinye izixeko ezininzi ezidumileyo. Le condo ikwindawo enoxolo eneendlela zokuhamba, indalo eninzi, imizimba emihle yamanzi ngokunjalo.
Iindidi ezahlukeneyo zokurenta ezikhoyo. Irenti yexesha elide. Irenti yexesha elifutshane. Inyanga neNyanga, njl. Sineziyunithi ezingaphezu kwe-10 ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo.
Umbuki zindwendwe ngu- Cabin
Sifumaneka ngalo lonke ixesha.